Mpanamboatra kodiarana fingotra any Sina | Ruiyi
Tondra-by eny amoron-dranomasina
Zavamaniry voninkazo rakotra voninkazo
Fiara fiakanjoana any ivelany
Kalitao tsara, azo ampiharina sy tsotra, fahaiza-mitondra lehibe, androm-piainana lava, fivoriambe mety.
Ny iray amin'ireo tombontsoa lehibe azo avy amin'ny kodiarana fingotra dia ny fahafahany misintona ny tsy fitovian'ny tany hanomezana fitsangatsanganana moramora kokoa, tsy misy fikorontanana sy fikororohana.
Ilaina indrindra izany rehefa mitondra entana mavesatra.
Rehefa ampiasaina miaraka amin'ny casters, ny kodiarana pneumatic dia manana tombony lehibe, anisan'izany ny:
Fahaizana mitondra entana lehibe. Ny kodiarana vita amin'ny kodiarana dia malaza, fampiharana indostrialy noho ny fahaiza-manaony.
Tsara kalitao, azo ampiharina sy tsotra, fahaiza-mitondra lehibe, androm-piainana lava, fivoriambe mety.
Iray amin'ireo tombony lehibe azo avy amin'ny Kodiarana fingotra dia ny fahafahan'izy ireo mandray ny tsy fitoviana amin'ny velaran-tany hanomezana fitetezana moramora kokoa, tsy misy fikolokoloana sy fikororohana.
Izany indrindra ZAVA-DEHIBE rehefa mitondra entana marefo.
Fahaizana mitondra entana lehibe. Ny kodiarana vita amin'ny kodiarana dia malaza, fampiharana indostrialy noho ny fahaizany mitondra entana lehibe.
Mamela ny fitaterana milina mavesatra na mavesatra be any amin'ny tany mifangaro izy ireo.
tsaramahazaka absorbency. Fantatra amin'ny fahaizan'ny fitaterana malama, ny kodiarana pneumatika dia safidy lehibe rehefa mihetsika entana marefo na marefo.
Miasa ampy amin'ny sehatra anatiny sy ivelany, ny kodiarana vita amin'ny kodiarana dia mahazaka taitra be noho ny casters hafa.
fahaizana. Ny fitambaran'ny endri-tsoratry ny fahatairana sy ny lamina misy eo amin'ny kodiarana dia mahatonga ny kodiarana pneumatika ho tsara ampiasaina. Izy ireo dia mahatanty ny tany ivelany isan-karazany raha mbola manome fitaterana malama.
Fihenan'ny tabataba. Ny tabataba dia azo raisina ho antony mampidi-doza amin'ny toeram-piasana maro, noho izany ny fahafahan'ny fitaterana enta-mavesatra mangina dia mahatonga ny kodiaran'ny pneumatika ho safidy lehibe.
Raha ny tombonyny kodiarana fingotra mihoatra ny fatiantoka, misy lafin-javatra vitsivitsy izay tokony homarihina. Ny fatiantoka lehibe amin'ny kodiarana fingotra dia ny loza mety hitranga amin'ny puncture.
Ny kodiarana pneumatika dia mahazatra amin'ny rivotra feno vovoka, na izany aza, misy kodiarana fingotra tsy misy fisaka sy fingotra ankehitriny izay manalefaka izany loza izany.
Loza hafa iray hafa mifandraika amin'izany Kodiarana fingotra dia ny mety hisian'ny fitomboan'ny familiana kodiarana, na izany aza, mora vahana amin'ny fampitomboana ny fitarihana swivel izany.
Isa antonony 110
ara-nofo Vovoka thermoplatic fingotra voaverina
Anaran'ny vokatra Kodiarana fingotra
MQQ 100 pcs
Fampiharana Famokarana vokatra vita amin'ny rubber
Size Size haben'ny
Karazana Tyoda Wheels
Toerana niandohana Qingdao Sina
Fonosana Kitapo / boaty
Ora nanomezana 3Days
asa Fanoherana fanoherana mitafy menaka tsy tantera-drano sy tsy fikosehana
♦ Mampiasà scenario
Kodiarana amin'ny fiara sasany.
Fisafidianana ny kodiarana fingotra ary ny caster dia zava-dehibe amin'ny fanatanterahana asa sasany amin'ny fomba mahomby sy mahomby.
Raha tsy misy ny fiasa marina, ny casters anao dia mety hiharan'ny fahasimbana na tsy hanana fiarovana ilaina.
Mba hisorohana ny vela-pandrika dia mikendry hatrany ny hiara-hiasa akaiky amin'ny mpanjifanay izahay mba hahazoana antoka fa manao safidy tsara izy ireo amin'ny antsipiriany momba ny fampiharana tadiavin'izy ireo.
Kodiarana fingotra dia safidy malaza amin'ny fampiharana manaraka:
Fampiharana mandeha ho azy.
Fiarovana ny vokatra.
Ny rafi-kodia vita amin'ny kodiarana mahazatra dia mety namboarina.
♦ Mampiasà fametrahana
Jereo ny boky torolàlana momba ny fametahana manokana.
Na Mifandraisa aminay.
♦ Fanamarihana ho an'ny mpanjifa
Tanana tsara, tsy mora solafaka, fampisehoana tsy mahazaka akanjo, fampisehoana aina.
Manantena ny hahatongavanao amin'ny mpamorona andiany manaraka.
Hafainganan'ny niandohany Qingdao, Sina
Rand Name Junmei
ara-nofo Vovoka thermoplastic, fingotra voaverina
Famantarana Logo namboarina
Fahaizana manome 50000 Piece / Pieces isan-taona
Kitapo misy ny antsipiriany fonosana
Seranan-tsambo Port Qingdao any Shina
Ohatra amin'ny sary
Fotoana mitarika② Quantity (Pieces) 1-300> 300Est. Fotoana (andro)
Teo aloha: Kodiarana PU
Manaraka: Asandrato ny lalamby fanamboarana fiara
F: Afaka mitondra ny mariky ny vahiny ve ny vokatrao?
F: Azonao fantarina ve ny vokatrao?
F: Ahoana ny fanamboarana ny vokatrao? Inona avy ireo fitaovana ao?
A: Fampivoarana tena na namboarina manokanaMaterial: vy, vy, plastika, lamba sns
F: Mandra-pahoviana ny fampandrosoana ny bobongolo anao?
A: 7 andro
F: Miakatra amin'ny lasitra ve ianao? Ohatrinona ity? Azoko averina ve? Ahoana ny famerenana azy?
A: Sarany ny sarany bobongolo, manonona teny mifanaraka amin'ny toe-javatra sy habetsahan'ny vokatra manokana an'ny mpanjifa.
F: Mandra-pahoviana no hiasa ara-dalàna ny mould anao? Ahoana no hitazomana isan'andro?
A: Ny fahaizan'ny lasitra tsirairay
F: 10 taona firy ny fanadiovana sy fikojakojana ara-dalàna?
A: Ny fahaizan'ny famokarana dia miankina amin'ny isan'ny bobongolo samihafa.
F: Inona ny fizotry ny famokarana anao?
A: Ny mpanjifa dia mamaritra ny habetsahan'ny vokatra, ny fomba, ny teny nalaina, ny fifanarahana, ny fandoavana, ny famokarana ary ny fandefasana
F: Mandra-pahoviana ny fotoana fanaterana vokatra mahazatra anao?
A: 2-3 volana, fototra manokana ary habetsany
F: Manana kaomandy farafahakeliny farafaharatsiny ho an'ny vokatrao ve ianao?
A: Raha eny dia inona ny habetsan'ny kaomandy farany ambany? Tsia,
F: Firy ny orinasanao? Inona ny sandan'ny vokatra isan-taona?
A: 800 metatra toradroa, valiny 50 miliara
F: Mandra-pahoviana ny androm-piainan'ny vokatrao?
A: 3-5 taona eo ho eo, miankina amin'ny toe-javatra manokana,
F: Inona avy ireo sokajy manokana an'ny vokatrao?
A: 1. Hambo fanamboarana fiara
2. Fiara fialamboly ivelany
3. Fitaovana zaridaina (rakotra voninkazo sy trano fonenana)
4. Fefy momba ny biby
5. Fiara fitaovana zaridaina
6. Kodiarana PU
7. kodiarana fingotra
F: Inona avy ireo fomba fandoavanao vola azo ekena?
A: Famindrana banky
F: Iza ny vondrona sy tsena sahaza ny vokatrao?
A: Vondron'olona mahazatra isan'andro,
F: Firenena sy faritra aiza no nanondranana ny vokatrao?
A: USA, Canada, UK, France, America, Europe, sns
F: Mahomby ve ny vokatrao? Inona avy ireo tombony manokana?
A: Eny, io vokatra io ihany, manana fitaovana sy vidiny tsara kokoa izahay.
F: Mandray anjara amin'ny fampirantiana ve ny orinasanao? Inona avy ireo pitsopitsony?
A: Mandray anjara amin'ny fampirantiana, China Import and Export Fair, sns
Asandrato ny lalamby fanamboarana fiara
Trano voninkazo rakotra zaridaina zaridaina
ADDRESS: HUANDA Road, Lingang Industrial Park, West Coast New District, Qingdao City, Shandong Province, Sina
Kamio mixer, China Concrete Mixer, Kodiarana PU, Sina PU Foam Wheel, Caster Wheel, China PU Wheel,